Vaovao tambatra | NewsMada
Miisa 2 tapitrisa ny taratasy fanamarinana fananan-tany hozaraina hatramin’ny taona 2022. Manohana ity fandaharanasa ity ny Banky iraisam-pirenena, nampitombo avo roa heny ny famatsiam-bola ho an’ny fambolena sy ny fiompiana, ary hiarovana ny fananan-tany (Casef).
Hatao atsy ho atsy ny sonia ny fifanarahana famatsiam-bola hanamboarana ny lalana RN-5A, mampitohy an’Ambilobe sy i Vohemar. Tsiahivina fa efa natomboka ny taona 2018 ity asa ity ary nohavaozina ny taona 2019. Mamatsy vola azy ny governemanta sinoa amin’ny alalan’ny banky Exim Bank, mitentina 150 tapitrisa dolara.
Tsy maintsy ampiasaina amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa (tohodrano, sekoly, lalana, fitaovam-pambolena sy fiompiana, sns) ny fanampiana avy any ivelany. Nanamarika mantsy ny filoha Rajoelina fa saika mifototra amin’ny andrimpanjakana, toy ny fampiofanana, ny fanomezana ordinatera sy fiara ho an’ny fitantanana ny fanampiana nefa tsy misy vokatra mivantana amin’ny fiainam-bahoaka.
Notendrena ny lehiben’ny vaomieram-paritry ny tolotrasam-panjakana any amin’ny faritra miisa 16. Voatendry koa ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Antokon-draharaha misahana ny famatsian-drano any atsimo (AES), i Fiandraza. Lasa tale misahana ny mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany koa Rtoa Rakotoarisoa Volanirina ary sekretera jeneraly Rakotovahiny Liva Jean Luc.